भाटभटेनीमा सपिङ गर्नुहुन्छ ? ध्यान दिनुस् नत्र ….। – www.agnijwala.com
भाटभटेनीमा सपिङ गर्नुहुन्छ ? ध्यान दिनुस् नत्र ….।
भाटभटेनी सुपरमार्केट नेपालको नाम चलेको ब्रान्ड हो। एक दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा यसको सुपरस्टोर छ। त्यही मध्येको एक कलंकीमा एक जनाको ग्राहकले सपिङ गर्दाको अनुभवबाट तपाईँलाई सचेत गराउँन चाहान्छौ।हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह होईन । सचिन सल्लाह दिन्छौ।
राति सपिङ गर्ने क्रममा सामान लिँदालिँदै २५ थोक पुगेछ। स्टोर बन्द हुने बेला भइसकेको थियो। काउन्टरमा बसेकी कर्मचारीले एक-एक गर्दै सबै साामानको कोड रिडिङ गर्दै कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्दै बिल निकालिन्- ११ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ ९६ पैसा।
ग्राहक ले डेबिट कार्डबाट भुक्तान गरे र सामान लिएर निस्किए। घर पुगेर बिल हेर्दा पो झसङ्ग भए।
बिलको २५ औँ नम्बरमा ४ हजार ८ सय ८४ रुपैयाँ ९६ पैसाको सामान रहेछ। एउटाको ४०७ रुपैयाँ पर्ने सामान १२ वटा के लिएछौँ भनेर अचम्मै लागेछ। नाम चेक गर्दा थाहा भयो त्यो त शिशाको गिलास पो रहेछ।
गल्ती स्वीकारे पनि फेरि ग्राहकलाई नै त्यो गल्तीको भार बोकाउनु पर्ने के खालको नियम होला ? यस्तो नियमले भाटभटेनी प्रतिको विश्वास कायम रहन्छ कि रहन्न ?